Fentanyl: ဆေး 50 ဘိန်းဖြူသန်း Times ကပိုမိုတဲ့စွမ်းရည် - သတင်း Rule
Fentanyl: ဆေး 50 ဘိန်းဖြူသန်း Times ကပိုမိုတဲ့စွမ်းရည်
၏ 69 ဆိုးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခံရသူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, 68% ထိုဒြပ် opioid ယူခဲ့, သောမက္ကဆီကန်ဂိုဏ်းစေ Interstate အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှခိုးသွင်းဖို့သင်ယူကြပြီ. အဆိုပါမူးယစ်ဆေး '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသတ်ဖြတ်သည်အဘယ်သို့သောအ,'' မန်ချက်စတာရဲ့ရဲချုပ်ကပြောပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Fentanyl: ဆေး 50 ဘိန်းဖြူဖျက်ဆီး New Hampshire ထက်အဆပိုမိုတဲ့စွမ်းရည်” မန်ချက်စတာမှာဆူ Zalkind ကရေးသားခဲ့သည်, New Hampshire, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 4th ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 12.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အရာရှိ Shaun McKennedy ရဲ့ပထမဦးဆုံးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခေါ်ဆိုခ 6.39pm မှာလာ. သူကအပေါ်ဥဩလှည့်နဲ့ကူးစီးကျလာတယ် 245 Laurel လမ်း, တစ်ဦးအလတ်စားတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ. တစ်ဦးစွန့်ပစ်ကလေးရထားရှေ့ခြံရှိရဲ့. McKennedy အဖြစ်သူ၏တံခါးထဲက Chucky ရှပ်အင်္ကျီပွူတစ်ဦးသတို့သမီးဝတ်ဆင်သောသူကို, 24, အပေါ်ထပ်စီးကျလာတယ်.
ဒေသခံမီးသတ်ဌာနနှင့် EMT ဦးစီးဌာနထံမှအများအပြားကယောက်ျားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်, တစ်စိုစိုစွတ်သောတီရှပ်နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအတွင်းဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ 31 နှစ်အရွယ်ယောက်ျား၏ထင်ရသောကျမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပတ်လည်မှာလှုပ်ရှား. ဒါဟာအခွအေန McKennedy င်, 24, သူနောက်ဆုံးဇူလိုင်လအင်အားဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအကြိမ်များစွာမှတဆင့်သိရသည်.
"လယ်ရီ! Larry က! အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေဖို့!"Justin Chase yells, တစ်ဦးမန်ချက်စတာ EMT ဆေးမှူး. သူက naloxone ထိုး, opioids ၏သက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့ဆေး, လာရီရဲ့နှာခေါင်းကိုတက်.
သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချောက်ချားနှင့်သူ၏မျက်စိပွင့် pop. "ဘာတွေထူးလဲ?"သူကမေးတယ်, blinking မပါဘဲ.
Larry က Elliot ဆေးရုံတွင်အရေးပေါ်အခန်းကိုသွားရန်သဘောတူ, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအသည်မိမိအလွန်အကျွံသုံးစွဲဖို့ဦးဆောင်အတိအကျဘာကိုဆုံးဖြတ်မီကရက်သတ္တပတ်ဖွစျလိမျ့မညျ. ထိုသို့ပြုမိရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်, သူထိုညဉ့်အကြာတွင် McKennedy ကိုပြောတယ်. အများအားဖြင့်သူဘိန်းဖြူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဂရမ်ကိုတစ်နေ့အကြားထိုး; ကညနပေိုငျးသူသာယူ .2 ဂရမ်, ဒါမှမဟုတ် "ခဲတံ". သူကကိုယ့်ကိုကျော်နှစ်လစင်ကြယ်သောဖြစ်င်ပြောပါတယ် - - သို့မဟုတ်က fentanyl နှင့်အတူခပ်ခဲ့လျှင်သူသည်မိမိအသည်းခံစိတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကွောငျ့သူဟာ overdosed လျှင်သေချာမဖွင့်.
ထိုမူးယစ်ဆေးစတင်အာဏာတည်အုပ်ချုပ်ရေးအဆိုအရ, fentanyl တစ်ဒြပ် opioid ဖြစ်ပါသည် 100 မော်ဖင်းအကိုက်ထက်ဆပိုမိုအစွမ်းထက်, နှင့် 30-50 ဘိန်းဖြူထက်ဆပိုမိုအစွမ်းထက်.
တွင် 2013, မန်ချက်စတာမြို့ခဲ့ 14 ဆိုးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲ, 7% သူတို့ရဲ့စနစ်ထဲမှာ fentanyl နှင့်အတူသားကောင်များပါဝင်ပတ်သက်ရာ, ဝီသည်နှင့်အညီ. တွင် 2015, 69 သေဆုံးသူများ overdosed လူ, 68% fentanyl ယူခဲ့သော၏.
နိုင်ငံပိုင်စာရင်းဇယားကိုနောက်တဖန်မ cheery များမှာ. New Hampshire အတွက်အကြီးအကဲဆေးဘက်စစျဆေးသူ၏ရုံးမှာအရာရှိတွေကသူတို့ထံမှစမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များကိုလက်ခံရရှိရန်ရှိသေးဟုပြော 36 သံသယရှိသူအလွန်အကျွံသုံးစွဲ, ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်မှတ်င် 399 ထို့ကြောင့်ဝေးဆိုးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲသားကောင်များ, သူတို့ရဲ့စနစ်ထဲမှာ fentanyl နှင့်အတူသေဘယ်သူကိုပိုထက်သုံးပုံနှစ်ပုံ.
"ဒါဟာမာရီယို Batali တူမဖွင့်,"ဝီမန်ချက်စတာမှာသူ့ရုံးခန်းကနေပြောပါတယ်, အကျော်ကြားတဲ့အကြီးအကဲနှင့်အတူသူတို့၏ထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တောက်ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်နှိုင်းယှဉ်. "ဒီယောက်ျားတွေပဲရောနှောထဲမှာပစ်နေကြတယ်. သငျသညျစုံလင်သောင့်နှင့်အဘယ်သူမျှမကနေသေဆုံးသွားကြောင်းတစ်အိတ်ရနိုင်. သင်တို့သည်လည်းတစ်အိတ်ရနိုင် [ကန့်] ဖြောင့် fentanyl နှင့်သင်တို့ကိုသတ်ပစ်မယ်။ "
ဝီမန်ချက်စတာမှာမကြာသေးမီကဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်ကာလအတွင်းကပြောသည်, သူတစ်ဦးကုန်သည် whey ပရိုတိန်းနှင့်အတူ fentanyl ရောစပ်တွေ့ရှိရ. လောရင့်အတွက်တစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိမှဦးဆောင်ကြောင်းအခြားလက်နက်အတွက်, မက်ဆာချူးဆက်, ဖဲဝေစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့တစ်မီးဖိုချောင် Blender အတွက်ဘိန်းဖြူနှင့် fentanyl ဖော်စပ်ခဲ့.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဝီကဆိုသည်, မန်ချက်စတာမှာ opiate သုံးစွဲမှု၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တိုင်းပြည်၏ကျန်ကဲ့သို့တူညီသောပုံစံများကိုအောက်ပါအတိုင်း. အဆိုပါအကျပ်အတည်းကို OxyContin တူဆေးညွှန်းကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများမြင့်တက်ဖြင့်ပို့ဆောငျခဲ့. မကြာခဏ ပို. အန္တရာယ်များသောလှည့်တစ်ဦးစျေးသက်သာမြင့်မားရ​​ှာနေစွဲ, သေးသိသိသာသာစျေးနှုန်းချိုသာ, ဘိန်းဖြူ.
အဆိုပါအပြောင်းကာလအမှတ်, သူကပြောပါတယ်, ပြီးနောက်တစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်ပျက် 2010, Purdue လယ်သမားကပိုခက်ခဲနှင့်အတူတမ်နှင့်မြင့်မားရရအောင်ဆေးပြောင်းလဲလာသောအခါ. မက္ကစီကိုပေးသွင်းအလန်းလာသောဈေးကွက်နှင့်အတူတက်ထားရန်အမြန်ခဲ့ကြ, နှင့်မန်ချက်စတာမှာစွဲ, Interstate အနီးတွင်ထိုင်သော 93, ခရီးစဉ် 3, ခရီးစဉ် 81, နှင့်လမ်းကြောင်း 9, အဘယ်သူမျှမပြဿနာထောက်ပံ့ရေးသို့ပုတ်ခဲ့.
Fentanyl '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသတ်ဖြတ်သည်အဘယ်သို့သောအ '', မန်ချက်စတာရဲ့ရဲချုပ်ကပြောပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: Alamy
မန်ချက်စတာဘို့ပိုဆိုးတာက, DEA အေးဂျင့်ဖြစ်သူ Tim Desmond ထောက်လှမ်းရေးကမက္ကဆီကန်ဂိုဏ်းဆိုတာကိုပြသကပြောပါတယ်, အထူးသအယ်လ် Chapo ရဲ့ Sinaloa မူးယစ်အုပ်စု, ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ပြီ 50% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းကနှင့်အရှေ့မြောက်ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြ.
Fentanyl ပထမဦးဆုံးအထွေထွေထုံဆေးအဖြစ် 1960 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်, ထိုသို့ဆဲမှန်မှန်ဆရာဝန်များအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်, များသောအားဖြင့် lozenges နှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၏ပုံစံအတွက်, မကြာခဏကင်ဆာဝေဒနာရှင်များအတွက်.
စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆေးညွှန်းပုံစံများကိုအလွဲသုံးစားဖို့နည်းလမ်းတွေတွေ့ကြပြီ, အပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအပေါ်နို့စို့နေဖြင့်, ဥပမာအားဖြင့်. ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာသေးမီက, မက္ကဆီကန်ဂိုဏ်းတရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လိုအပ်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများတင်သွင်းနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် fentanyl အောင်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြ, ထို့နောက် Interstate အဝေးပြေးလမ်းစနစ်နယ်စပ်တလွှားနှင့်ပေါ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းမှောင်ခို, Desmond ကပြောပါတယ်.
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှေ့တော်၌ fentanyl ပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်. အကြား 2005 နှင့် 2007, ပို 1,000 လူများတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကနေသေဆုံး, အများအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရှိ. အ DEA မှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအဆိုအရ, သူတို့အားသေဆုံးမှုအားလုံးမက္ကစီကိုတစ်ခုတည်းဓာတ်ခွဲခန်းမှခြေရာခံနိုင်. အ DEA အဓာတ်ခွဲခန်းပိတ်ပစ်ပြီးတာနဲ့, အ fentanyl ကပ်ရောဂါလည်းရပ်တန်.
ပတ်ပတ်လည်ဒီအချိန်, အ DEA သေးနယူးအင်္ဂလန်အတွက်ကပ်ရောဂါများအတွက်တာဝန်ရှိမက္ကစီကိုတစ်ခုတည်းဓာတ်ခွဲခန်းကိုပစ်မှတ်ထားမထားပါဘူး, Desmond ကပြောပါတယ်. အစား, ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များနှင့်ဒေသခံရဲများကဧရိယာကုန်သည်တွေကိုပစ်မှတ်ထားနေကြသည်. "တစ်ခါတလေကျနော်တို့လှေကားတက်သွားနိုင်ရန်အတွက်အစားအစာကွင်းဆက်၏အောက်ခြေတွင်စတင်ရန်ရှိသည်,"ဟုသူကဆိုသည်.
မန်ချက်စတာမှာ, ဝီမြေပြင်ကိုတက်ကနေကပ်ရောဂါဆီးရန်လုပ်ဆောင်နေသည်. သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နွေရာသီအတွက်အကြီးအကဲဖြစ်လာသည်လာတဲ့အခါ, သူသည်မိမိမူးယစ်ယူနစ်ကျော်လှည့်, နှင့်လမ်းပိတ်ထားသူတို့ကိုရဖို့လျင်မြန်စွာကုန်သည်တွေဖမျးဆီးစုံထောက်အမိန့်ထုတ်, အစားထက်ပိုပြီးနှံ့နှံ့စပ်စပ်အမှုတညျဆောကျဒါမှမဟုတ်ပေးဝေရေးလိုင်းတက်အလုပ်လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်း.
သူကလည်းတစ်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ် task ကိုအင်အားသုံးတည်ဆောက်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့င်, နှမ်းဖတ်ကျောက် Hammer ကိုခေါ်, နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလစတင်ခဲ့ရာ; သ, သူကပြောပါတယ်, ထိုယူနစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ 77 ဖမ်းဆီးမှုများ. သူကလည်းပြန်လည်နာလန်ထူဆေးခန်းများအတွက်ပြည်နယ်ထောက်ခံမှုတစ်ခုတိုးလာကိုခေါ်တော်မူပြီ.
McKennedy အလွန်အကျွံသုံးစွဲထိုညဉ့်ကိုခေါ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတုန့်ပြန်. ပထမဦးစွာမာကုအမည်ရှိသောသူ၏အနှောင်းပိုင်းတွင်အသက် 20 အရွယ်ရှိသူတစ်ဦး, အဘယ်သူသည်သူ၏လက်ရုံးတအပ်နှင့်အတူတစ်ပင်းမင်းဆိုင်ထဲကအောင်မြင်ပြီးနှင့်အပြည့်အဝတစ်, နှင့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်. မာကုဆေးရုံမှ EMTs အတူလိုက်ပါဖို့လျော့နည်းဆန္ဒရှိခဲ့.
"ကို fuck ဆိုတဲ့ယခုဘဝ၌အသက်ရှင်ရန်လိုအဘယ်သူသည်?"မာကု၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, Chase ကပြောပါတယ်, သတ်သေ ideation ဖြစ်ပါသည်, သော EMTs အုံးမည်ဆေးရုံသူ့ကိုယူရန်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ဆေးရုံမှာ, မာကုနောက်ကျောကသူ့ဘိန်းဖြူအဘို့အ McKennedy မေးလျှင်.
နောက် call သူမ၏အစောပိုင်းအသက် 30 ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အကြီး. အရုဏ်မာရီမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့တိုက်ခန်းမှာ overdosed. ဒါဟာသူမရဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် naloxone နှစ်ယောက်ဆေးများကိုယူ. သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်. သူတို့ကတစ်ဦးခန်း၌တစ်ဦးအဖြစ်လည်းစာအုပ်လာမည့်တံခါးကိုအပေါ်အက္ခရာထွက်စာလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်.
McKennedy EMTs တစ်မီးဖိုချောင်ဓါးဖြင့်မိမိအသက်ကိုယူရန်ကြိုးစားခဲ့သောသူတစ်ဦးစှဲလမျးသူမှတက်ရောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့စဉ်အခြားအရာရှိတစ်ဦးစတုတ္ထအလွန်အကျွံသုံးစွဲခေါ်ဆိုခမှတုန့်ပြန်. သူကယခင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှ McKennedy အသိအမှတ်ပြု. ပရဒိသုမှာ "နောက်ထပ်နေ့က,အရာရှိတံခါးကိုအားဖြင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ် "ဟုသူကဆိုသည်.
အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အခိုက်မှာတော့, တစ်ဦးအသွားအလာရပ်တန့်နှင့်အတူ McKennedy ကူညီအရာရှိချုပ်မာကုသမ္မတအကွီနို. သမ္မတအကွီနိုဟာမူးယစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုမှုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာစွဲအသိအမှတ်မပြုဖို့ပိုပြီးခက်ခဲရတဲ့င်, ဟုသူကပြောသည်. ဘိန်းဖြူ detect ရ​​န်လွယ်ကူသည်, အသုံးပြုသူရဲ့ကျောင်းသားအသေးစားနှင့် pin ကိုတူရ. "Fentanyl ကျောင်းသားများကန့်သတ်မထားဘူး,"ဟုသူကဆိုသည်. "သူတို့ကအစားလက်ခံသဘောတူ,"သူကရှင်းပြခဲ့သည်, မိမိအရင်ဘတ်အားမိမိမေးစေ့ကျဆင်းနေ.
တွင် 10.30, McKennedy အခေါ်ဆိုမှုများအတွက်စာရင်းကိုင်စာရွက်စာတမ်းဖြည့်စွက်ရန်ဌာန၏မှပြန်လာသော. မန်ချက်စတာမှာနောက်ထပ် "တသမတ်တည်း" ပြောင်းကုန်ပြီ, သူကောက်ချက်ချ. "သာမန်ထဲကအဘယ်အရာကိုမျှ။ "
← ဆေးခြောက်နှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်အခက်တွေ့စေသော 10 ငွေသိမ်းဆည်းခြင်းအဘို့အအကောင်းဆုံး App များ၏ →